केही वर्ष पहिलेका खच्चड मालिक अहिले गाडी मालिक ! - Everest Dainik - News from Nepal
केही वर्ष पहिलेका खच्चड मालिक अहिले गाडी मालिक !
जाजरकोट, भदौ २३ । जाजरकोटका अधिकांश खच्चड मालिक अहिले गाडी मालिक भएका छन् । सडक विस्तारले उनीहरूलाई खच्चडबाट गाडी मालिकमा रूपान्तरण गरिदिएको हो । नलगाड नगरपालिका वडा १० का अशोक ध्यारको अहिले एउटा जिप छ । एक वर्षअघिसम्म नौ खच्चडका मालिक ध्यारले गत वर्ष खच्चड बिक्री गरेर जिप खरिद गरे।
उनकै छिमेकी कालीबहादुर रोकाले पनि खच्चड बेचेर एउटा ट्याक्टर र एउटा जिप किने । उक्त नगरपालिका-७ दल्लीबाट वडा नं १३ तल्लुसम्म ट्र्याक्टरबाटै सामान ढुवानी गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेको उनले सुनाए ।
याे पनि पढ्नुस टेलिफोन टावर बनाउने प्रतिबद्धता गर्ने दललार्इ मात्र भोट दिन बासिन्दाहरु एकजुट
जाजरकोट-डोल्पा सडक डोल्पासम्मै पुगेपछि ध्यार र रोका मात्रै होइन उक्त नगरपालिकाका अधिकांश खच्चड व्यवसायीले पछिल्लो समय गाडी खरिद गरेर ढुवानी व्यवसाय शुरु गरेका छन् ।
सडक पुग्नुअघि उनीहरूले खच्चडमा सामान लादेर डोल्पा पठाउने गर्थे । अहिले त्यो काम उनीहरूका सवारी साधनले गरिरहेका छन् । रु ३२ लाखमा १५ खच्चड बिक्री गरी त्यसमा थप लगानी गरेर जिप र ट्र्याक्टर खरिद गरिएको उनको भनाइ छ  ।
खच्चडको ठाउँमा गाडी गुड्ने भएपछि खच्चड बिक्री गरेर गाडी खरिद गरिएको अन्य यातायात व्यवसायीहरू पनि बताउँछन् जिल्लामा परम्परागत ढुवानीका साधन खच्चडको प्रयोग शून्य बन्दै गएको छ । एक दशकअघिसम्म जिल्लाका सबै ठाउँमा खच्चडमार्फत नै मालसामान ढुवानी हुन्थ्योे ।
उक्त नगरपालिकामा पालिएका खच्चडले अहिले डोल्पातिर सामान ढुवानी गर्ने गरेका छन् । डोल्पा सदरमुकामदेखि गाउँगाउँमा मालसामान ढुवानी गर्न अझै खच्चडकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले जाजरकोट डोल्पा सडकखण्डको खदाङसम्म यातायातका साधन सञ्चालन हुन्छ । -रासस
याे पनि पढ्नुस गयल विद्यार्थीका अभिभावकले एक दिन विद्यालयमा काम गर्नुपर्ने
ट्याग्स: jajarkot, jeep, खच्चड मालिक